Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Kyle Walker-Peters Childhood Story Plus Na-emeghe Ihe Ndị Na-eme Ememe
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye amara aha ya "Kyle“. Anyị Kyle Walker-Peters Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị ama ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye ọkpụkpọ nwere nnukwu ikike maka ọdịnihu. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Kyle Walker-Peters 'Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Kyle Walker-Peters Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite, aha ya bụ Kyle Leonardus Walker-Peters. A mụrụ ya na 13th ụbọchị nke Eprel 1997 na nne ya, Mary Walker-Peters na nna, Dennis Walker-Peters na mpaghara Greater London nke Edmonton, United Kingdom.
A mụrụ Kyle n'ime agbụrụ Black Black nke na-arụ ọrụ n'etiti ezinụlọ. Dị ka akụkọ sitere n'ịntanetị, a pụrụ ịchọta ezinụlọ ya na Jamaica.
Kyle tolitere dị ka nwatakịrị dị jụụ na nke dị jụụ, àgwà ọ ketara n'aka nna ya, Dennis. Ndị nne na nna, Dennis na Mary nwere àgwà nke ịchebe nwa ha nwoke ma hụ na ọ gbasoro ụzọ ziri ezi, nke gụnyere agụmakwụkwọ ya.
Na-etolite na Tottenham, ezinụlọ Kyle Walker-Peter nwere ọtụtụ ndị na-akwado Arsenal ma e wezụga ya na ndị ikwu ole na ole bụ ndị na-akwado Tottenham.
Mkpebi Kyle Walker-Peters ghọrọ ọkachamara sitere n'aka nwanne nna ya, Philip Leonardus Walker bụ onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ ọkachamara na Millwall na Charlton Athletic.
Ugbu a na 60 dị ka n'oge edere, Phillip onye mechara bụrụ onye nkuzi bọọlụ gbara nwa nwanne ya nwoke Kyle ume isonye na egwuregwu bọọlụ dịka nwatakịrị.
N'inweta mmasị na bọl, Philip jide n'aka na obere nwa nwanne ya gbasoro ụzọ dị mma ka ọ na -achọ nkwado nne na nna ya nke kwenyere na ọnọdụ nwa ha agaghị emebi agụmakwụkwọ ya maka ọzụzụ bọọlụ.
Kyle Walker-Peters Biography-Ndụ Ndụ Mmalite:
Ịhụnanya Kyle maka ịgba bọl hụrụ ya ka ọ debanyere aha ya na Spurs ka ọ bụrụ onye ọkpọ ọkpọ na -eme ihe ike.
Kyle agaraghị eso Tottenham ma ọ bụrụ na enwetaghị enyemaka n'aka enyi nwanne nna ya Bryan King onye bụbu onye mgbaru ọsọ ya na onye otu ya na Millwall.
Bryan onye bụ 71 ugbu a (dịka n'oge edere) bụ onye na-eme nlegharị anya na Spurs n'oge enyere Kyle Walker-Peters aka.
Mgbe Kyle malitere na Tottenham, edeghị ya dị ka otu n'ime ndị egwuregwu kachasị mma n'oge ọgbọ ya. Agbanyeghị, ndụ na agụmakwụkwọ Tottenham na -atọ ụtọ na mbụ.
Ka oge na -aga, Kyle chọpụtara na ọ ghaghị ịchụ ọtụtụ àjà. Enwere oge ọ ga -abụ naanị ya ka achọtara na nnọkọ ụbọchị ọmụmụ.
Kyle Walker-Peters nwere afọ ojuju na ndụ ya n'ihi na o chere na ọ na-eme ihe ọ hụrụ n'anya; nke ahụ bụ "Ịgba bọl."
Ijikwa oge ndụ na Spurs:
N'ebe ndị ọzọ iji jikwa ndụ ya, Walker-Peters ga-ebi na digs na onye ọbịa ọbịa. Ya na Milos Veljkovic biri, onye egwu Serbian (nke dị n'okpuru) onye ya na Werder Bremen na-egwuri egwu dị ka n'oge ederede.
“Staynọ na Milos Veljkovic nyeere m aka ịnọrọ onwe m. Ekwesiri m ịsa ahụ m na isi nri ụtụtụ nke m. Ahụmahụ ndị dị otú ahụ na-enye aka n'ezie. ” kwuru, sị Kyle Walker-Peters
Ka Kyle na-enwe ọganihu kemgbe ọ dị afọ, ndị mụrụ ya gara n'ihu ịkụziri ya akwụkwọ na-achọpụta na ọ gụchara ya. Dabere na Kyle…
“M lekwasịrị anya n’agụmakwụkwọ mgbe m na-agba bọl ruo mgbe m ruru afọ 16. Emere m n’aka na m nwetara akara ule mara mma. N'ikpeazụ, enwere m ike ilekwasị anya na football m na nke ahụ nyeere m aka. "
Mgbe ọ gụsịrị akwụkwọ, oge ruru ka Kyle na-agbaso ụzọ ọ ga-esi nweta nkwekọrịta ọkachamara na Tottenham. Nke a weputara ọhụụ ọhụrụ na ndụ ya.
Kyle Walker-Peters Biography Eziokwu- tozọ A Maara Aha:
Akụkọ banyere Inweta Ndị otu egwuregwu dị ka ndị iro:
Ọ bịara dị oke njọ na ọbụnadị onye Kyle Walker-Peter bi na Miloš Veljković ka ya na ya na ndị egwuregwu ndị ọzọ na-asọrịta mpi maka otu n'ime ndị ntorobịa Spurs.
E nwere ọtụtụ ndị egwuregwu na-egwuri egwu n'otu ọnọdụ ahụ nke na-egosi njupụta maka ihe ndị chọrọ Spurs. N'ihi ya, asọmpi ghọrọ ntọala na ntọala dị mkpa n'ime ntọala agụmakwụkwọ Spurs.
“Ana m agbalị imeziwanye arụmọrụ m nke bụ ụzọ isi mee ka ndị egwuregwu ndị ọzọ nọ n'ọnọdụ m pụọ na klọb ahụ. Papa m nwere mmetụta dị ukwuu.
Ọ na -ekwu mgbe niile, 'Enweghị ndị enyi na football, ị nwere ike ịbụ enyi, mana ị gaghị enwe enyi. Site n'oge ahụ, achọpụtara m na m ga -achọ ọdịmma onwe m. ” kwuru Kyle Walker-Peters na FourFourTwo Akuko.
Kyle Walker-Peters Bio - Bilie na-ewu ewu:
N'ịmụta ichebe onwe onye na mmuo ahụ na-adị ndụ, Kyle Walker-Peters hụrụ na ya nwere ọganihu nke ngwa ngwa nke dugara ya n'inweta mba na England n'okpuru 18s na Under-19s.
Ọ maara otú e si edozi ihe ọbụna n'ọnọdụ ndị siri ike na nrụgide mgbe nile ka ọ bụrụ n'elu egwuregwu ya niile n'aha nke nkwekọrịta ọkachamara.
N'ime njem Walker-Peters niile iji nweta nkwekọrịta ọkachamara, otu onye ama ama nke ọ ga-anọgide na-enwe ekele ruo mgbe ọ bụ Ugo Ehiogu onye bụ onye nkuzi otu Tottenham Hotspur U23.
N'ụzọ dị mwute, Ehiogu nwụrụ na 21st nke Eprel 2017 mgbe ọ nwesịrị njide obi na ala ọzụzụ Spurs.
Otu ọnwa mgbe ọ nwụsịrị, asọmpi iko mba ụwa U20 bịara kpọọ Kyle Walker-Peters ka ọ nọchite anya England.
Ya na ndị otu egwuregwu ọkachasị Chelsea Callum Hudson-Odio nyeere England aka ijide iko nke Under-20s World Cup.
N'ịbụ onye mmeri U20 World Cup na-emetụta, Walker-Peters mepụtara ọmịiko maka akụkụ agụmakwụkwọ ya.
na Kieran Trippier inwe ike idozi nsogbu nsogbu na Serge Aurier na-enwekwa mmerụ ahụ, Walker-Peters hụrụ hụrụ dịka onye ọkpụkpọ kacha mma maka ọnọdụ ahụ.
N'ikpeazụ, Mauricio Pochettino mere ka nrọ ya mezuo ka ọ na-akpọ Walker-Peters ịbanye na nkwekọrịta ọkachamara ya anya ogologo oge na Tottenham Hotspurs ọ hụrụ n'anya.
Kyle Walker-Peters mmekọrịta mmekọrịta:
Ònye bụ Kyle Walker-Peters Girlfriend?
Kyle Walker-Peters bụ otu n'ime ndị egwuregwu bọọlụ ndị ịhụnanya ha na-agbanahụ nlele anya ọha naanị n'ihi na ọ nọ naanị ya ma ọ bụ na ọ nwere ike ọgaghị adị ugbu a.
Naanị ndị egwuregwu bọọlụ Bekee ole na ole nwere mmekọrịta ha na -aga n'ihu ọha. Ihe atụ zuru oke bụ Chora Ohia.
Kyle Walker-Peters Ndụ Nke Onwe:
Ịmata Kyle Walker-Peters ndụ onwe gị ga - enyere gị aka ịchọta ya n'ụzọ zuru ezu.
Igosipụta na ọ dị oke mma bụ nchịkọta akụkọ Walker-Peters. Nke a dị n'akụkụ ọrụ. Agbanyeghị, na ndetu nkeonwe, Walker-Peters egosila na ọ dị mma na njikwa PlayStation.
Kyle Walter-Peters anaghị eme egwuregwu football ma ọ bụ egwuregwu vidio. Ọ na-eji obi ụtọ na-elekọta ndị na-ahụ maka ọrụ ebere bụ ndị ya na ndị òtù Spurs na ndị nlekọta ọrụ ya na-enye aka nye obere ihe ùgwù.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ akụkọ Kyle Walker-Peters na nwata yana akụkọ Untold Biography.